Wonke umuntu uyazi ukuthi kwaba inhliziyo zonke Italy kwesikhathi Renaissance. Amakhosi olukhulu izwi, ibhulashi futhi umcabango yefilosofi avele ngamunye nezikhathi Yenguquko. Isiko Early Renaissance e-Italy ubonisa ukuvela amasiko ozokhula emashumini eminyaka alandela, le nkathi kwaba into kokuqala, ekuqaleni enkathini enkulu yobuciko eYurophu.
Ubuciko Ngasekuqaleni Renaissance e-Italy, esehlanganise Inkathi esukela cishe 1420 1500, esandulele High Renaissance nesiphetho Protorenessans. Njenganoma iyiphi inguquko, lezi engamashumi ayisishiyagalombili libhekene inhlanganisela izitayela nemibono ezazilwandulele, futhi entsha, Nokho, okuyinto, kuthiwa lathathwa esidlule, kusukela zabuna. Kancane kancane balahle abadali imiqondo ephakathi, ephendulela ukunaka kwabo ubuciko lasendulo.
Nokho, naphezu kweqiniso lokuthi ingxenye enkulu, bafuna ukubuyela izimiso ubuciko ukhohlwe bebonke, futhi yangasese namanje ngamasiko asendulo kwahlanganiswa ne entsha, kodwa kancane kakhulu.
Architecture Italy ngesikhathi Early Renaissance
Igama eliyinhloko e nesimo sesakhiwo esikhulu lesi sikhathi - ke Yiqiniso, Filippo Brunelleschi. Waba owumthombo Renaissance izakhiwo, organically embodying imibono yakhe, wakwazi ukuvula iphrojekthi ibe yinto ethakazelisayo, futhi, endleleni, usenayo wemisebenzi yakhe yobungcweti alondolozwe ngokucophelela phakathi nezizukulwane eziningi. Omunye impumelelo yakhe yokudala main ubhekwa ukwakhiwa, isenkabeni omkhulu eFlorence, lo enhle kakhulu ye okuyinto Dome - Florence Cathedral Santa Maria del Fiore futhi Pitti Palace, okuyinto Waba isiqalo bokwakha Italian asekuqaleni Renaissance.
Okunye impumelelo ebalulekile Italian Renaissance sihlanganisa Isigodlo the Doge sika, okuyinto etholakala eduze esigcawini main Venice sika, izigodlo eRoma unikela Bernardo di Lorenzo nabanye. Phakathi nale nkathi, izakhiwo Italy ivame organically sihlanganise izici umculo ephakathi classical, kuhloswe logic isilinganiso. Isibonelo esihle kakhulu salokhu isitatimende kungenziwa ngokuthi Basilica of San Lorenzo, futhi esandleni Filippo Brunelleschi. Kwamanye amazwe aseYurophu, Renaissance Early ushiye i izibonelo ngokulinganayo yesiteleka.
Abaculi of Early Renaissance
isiko yobuciko kwesikhathi libhekene isifiso Abadali, ebhekisela izigcawu zakudala, recreating nabo naturalism ukwabelana, ebakhulula uhlamvu okungenzeka. Omunye abameleli lokuqala brilliant kakhulu lesi sikhathi ubhekwa Masaccio, wasidalula wasebenzisa ngombono egcwele, ngokuletha emsebenzini wabo eduze nemvelo, wadinga ukudlulisela imizwelo nemicabango abalingiswa. Kamuva Michelangelo Masaccio Wawuthatha uthisha wakhe.
Okunye abameleli ebalulekile kulesi sikhathi baba Sandro Botticelli, kanye uLeonardo da Vinci, Michelangelo futhi abasebancane kakhulu. Imisebenzi edume kakhulu "Ukuzalwa Venus" Botticelli futhi "Spring" livela ushintsho bushelelezi, kodwa ngokushesha esuka yokuziphilisa engokwemvelo kanye lula. Ezinye eminye imisebenzi Renaissance abaculi ezifana Raphael futhi Donatello, kungabuye isibaluli lesi sikhathi, nakuba baqhubeka ukudala usuvele High Renaissance.
Culture of Early Renaissance e-Italy ngqo exhumene ne ebaziwe, kule nkathi, kuzakwenziwa ezingeni elifanayo kanye izakhiwo kanye imidwebo, waqala ukudlala indima ebalulekile ngokulinganayo. Iphayona bokwakha kwalesi sikhathi kwaba Lorenzo Ghiberti, ngubani, naphezu kolwazi lwakhe yomlando yobuciko ithalenta imidwebo, wazinikela impumuzo.
Yena inesifiso Ukuvumelana kuzo zonke izingxenye nemisebenzi yakhe futhi wakwazi ukuphumelela noma yini esendleleni yazo. Impumelelo eyinhloko Ghiberti steel imifanekiso ku iminyango Florentine okubhapathiza. Eziyishumi izingoma ezingengaphansi olunembile futhi olunzulu kuka iphethini olungokomfanekiso, bebonke sabizwa ngokuthi "Amasango ipharadesi".
Kuboshwe umfundi ka Ghiberti, Donatello, wavuma wezinguquko ka Renaissance ebaziwe. Yena bakwazile ukuhlanganisa emsebenzini Florentine intando yeningi kanye namasiko amasha wakhe ubuyele emuva ezikhathini zasendulo, ekubeni isibonelo oyisibonelo kwabaningi ekuvuselelweni abaculi, futhi hhayi kuphela Okugweda.
Culture of Early Renaissance e-Italy kuyinto engacabangeki ngaphandle Jacopo della Quercia, owandulela owedlule Okugweda ezimbili. Naphezu kweqiniso lokuthi yena wayevela inkathi Quattrocento, umsebenzi wakhe ngendlela ephawulekayo ezahlukene kusukela Ghiberti zakudala Donatello, kodwa umphumela wawo enkathini yokuqala Renaissance ayikwazi phansi. Ikakhulukazi Kuhle kokusho imisebenzi yakhe ingosi ye isonto San Petronio ngokuthi "Ukudalwa kuka-Adamu", okuyinto eye yaba nethonya phezu umsebenzi Michelangelo.
Culture of Early Renaissance e-Italy Nokho, futhi ivame ukuba sinye siyafanana - isibonisi zakudala ngokusebenzisa iphrizimu yemvelo, kodwa Abadali bayahamba izindlela ezihlukene, kokushiya amagama abo ku Renaissance isiko. amagama omkhulu abaningi, yobuciko ohlakaniphile futhi rethinking ephelele isiko kwezobuciko kodwa futhi zefilosofi hhayi kuphela - konke lokhu kuye kwasilethela isikhathi presaged nezinye izigaba Renaissance, sona sasungula amanye kwezifiso ngabe ngaqhubeka nayo.
Ivikelwe ka CTP.
Calla marsh - isimangaliso endaweni yakini